Masheya mashanu ane mukana mukuru wekukoshesa | Ehupfumi Zvemari
Iko mukana wekutenda ndeye mutsauko pakati pemutengo wakanangwa nemutengo wazvino yemidziyo yezvemari, mune ino kesi zvikamu zvekuchengetedzeka paruzhinji. Kuve imwe yemaparameter ayo anonyanya kushandiswa kutora zvinzvimbo mumisika yequity. Nekuti kuburikidza neiyi nzira yekudyara, hombe capital inowana inogona kuwanikwa uye pamusoro pemamwe masystem kuti chikamu chakanaka chevadiki nepakati varimi vanogarwa. Nezve zvinokwanisika kuongororwa pamusoro pe10% kana 20% uye kuti chimwe chezvinangwa zvakakosha mune chero mhando yekushanda pamusika wemasheya.
Kubva pane ino maonero, mukana wekudzokorora unoita imwe yematanho pamusika wemasheya uyo unoshandiswa nevamiriri vezvemari kusimudzira yavo mazano kune vatengi vako. Saka kuti vagone kuita sarudzo dzavo nevimbiso dzakakura dzekubudirira, kunyangwe zvichikosha kwazvo kusimbisa kuti haisi nzira isingakundike yekudyara. Sevamwe vashandisi vemusika wemasheya vanofunga kuti vanotongwa nemhando idzi dzeparameter kusimudzira mashandiro avo mumisika yemari.
Kuita kuti basa iri rive nyore zvishoma kwauri kubva zvino zvichienda mberi, tiri kuzokuratidza mamwe emitemo yazvino ine mukana wakakura wekuongorora zvakare. Mune zvimwe zviitiko, nezvikwiriso zviri pamusoro pe25% uye izvo zvinogona kuve mikana chaiyo yebhizinesi ye ita kuti zvinhu zviripo zvibatsire. Uye kuti pane imwe nguva kana imwe ivo vanogona kuzadzisa sezvo iyi sisitimu yekudyara isingade kuti mitengo iyi isangane munguva ipfupi. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinogona kutora nguva yakareba kuti usvike mazinga aya mumitengo yavo. Kana kunyangwe usinga svike iyo chero nguva, sezvazvakaitika munhoroondo nemamwe maitiro emusika unoenderera wenyika yedu. Asi zvirinani ivo vanoshanda sereferenzi yekutora chinzvimbo mune izvi zvemari zvinhu.
1 Kudzokorora kugona: Arcelor
2 Cellnex iyo huru musika wemusika inoshamisika
3 Acerinox haina kukosha
4 Santander ane rwendo rurefu
Kudzokorora kugona: Arcelor
Iyo ndeimwe yemhando yepamusoro kana zvasvika pakukwanisa kuongororazve nekuti iko kuchengetedzeka kunotambura kwakanyanya kudonha mumutengo wayo mune mamwe maekisheni. Panguva ino, fungidziro dzevamiriri vezvemari vanokupa kusvika 35% serwendo rwekumusoro kwemwedzi mishoma inotevera. Iyo ikambani inogona kuenda kure kure mukureba kwenguva nekuti ivo vakanyorwa zvakanyanya kusimba uye kuti pane imwe nguva nenguva vanogona kusvika pamatanho e30 euros pamugove. Hazvishamise kuti iwo mabhizinesi mitsara inogona kuve neakanyanya kukosheswa mumisika yemari, semakambani anotenderera ayo mushure mezvese zvavari. Kunyangwe muchiitiko ichi, ivo vane hukasha zvakanyanya mashandiro kupfuura mamwe ese nekuti kusagadzikana kwavo kunokurudzira kururamisa kwakasimba uko kunogona kutungamira varimari vadiki nepakati kuti vagadzirise zvinzvimbo. Mune chimwe chezviito zvine chinangwa chekudzivirira kubva mukumwe kudonha kunogona kugadzirwa kubva panguva iyoyo zvichienda mberi.
Cellnex iyo huru musika wemusika inoshamisika
Ehezve, iyi ndeimwe yehunhu husina miganho kumberi uye pasina kana kuramba kwechinhu chakakosha. Sezvakaitika gore rapfuura uye mumazuva mashoma atanga tiri muna 2020. Nekuti zvakare ine kuita kuri nani pane kune mamwe ese masecurity anoumba inosarudzika indekisi yemari munyika medu. Kusvika padanho rekuti rakanyatso kupetwa kaviri mutengo waro wemusika pamusoro pegore. Mukati meichi chirevo chakajairika, hapana mubvunzo kuti panguva ino inogona kunge iri imwe yemakambani emusika wekutengesa anogona kuunza mufaro wakawandisa kune vanobata zvikamu. Kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti izvo zvinowedzera izvo zvinogona kugadzirwa kubva panguva dzino zvichave zvishoma zvakanyanya kupfuura zvekare. Asi chero zvakadaro, kuve chikamu chedu chinotevera chekudyara portfolio kuita kuti capital iwanikwe yerudzi urwu rwekuita kunobatsira.
Acerinox haina kukosha
Imwe simbi inogadzira ndiyo iri kurudyi mune iyi yakasarudzika runyorwa rwehunhu hungangove iine hukuru hwepamusoro hwepamusoro kubva ikozvino. Iine mukana chaiwo wekuwedzera zvakapetwa mitengo iyo yakanyorwa panguva ino. Mupfungwa iyi, inofanira kusimbiswa kuti iri kutengesa pamatanho ari padyo zvakanyanya kusvika masere euros pamugove. Kana isiri nguva refu yapfuura yaive pamusoro pe8 euros, mazinga asingakwanise kutongwa kunze kwekuti ndichavashanyira zvakare mumakore anotevera. Naizvozvo, iko kudyara kwakanangana nepakati uye kunyanya kwenguva refu. Nekuwedzera kukurudzira uko iri kambani inogovanisa chikamu chinokwezva kwazvo kune vagovana. Kuve parizvino imwe yetsika dzinogona kuzvibata zvakanyanya kubva zvino zvichienda mberi. Kusvika padanho rekuti inogona kuve chaiyo bhizinesi mukana kune vanehasha mari.
Santander ane rwendo rurefu
Imwe yemaitiro ane rwendo rurefu kumberi ndiSandander. Nemitengo yazvino hakufanirwe kuve neshungu dzekutora zvinzvimbo mukati nepakati nepakati. Nekuti munzvimbo isina kunyanya kuomarara inokoshesa kudzikamisa pamusoro pevhareji yemitengo yakabatanidzwa muIbex 35. Mupfungwa iyi, zvinogona kunzi ndinogona kuve rimwe remabhangi anobatsira zvikuru nechinangwa chekutora chinzvimbo munguva dzino. Iine goho remugovano rinofungidzirwa pa6% pagore uye iro rinogona kubatsira kugadzira rakachengetedzeka rekuchengetedza bhengi kwemakore mashoma anotevera. Imwe yepamusoro-soro kubva kubhengi chikamu, uye padyo padyo neiyo inopihwa nemakambani emagetsi, ayo ari iwo anotungamira chinzvimbo ichi chekugovera uyu muripo kune wekugovana. Kuve imwe yemaitiro ekufunga nezvayo kugadzira yedu inotevera yekudyara portfolio.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Masheya mashanu ane mukana mukuru wekutenda
Bhadhara nefoni yako